Budata Hezarfen: İstanbul Semalarında APK maka Android
Budata Hezarfen: İstanbul Semalarında
Budata Hezarfen: İstanbul Semalarında,
Hezarfen: Ọ bụ egwuregwu nka nke enwere ike igwu na ekwentị gam akporo na mbadamba na mbara igwe Istanbul.
Otu nime oge kacha echefu echefu na akụkọ ihe mere eme anyị bụ mgbe Hezarfen Ahmet Çelebi si na Galata Tower wụpụ wee fega ruo Üsküdar. Ụgbọ elu a, nke bụ otu nime ihe omume mbụ nke ndị mmadụ na-eṅomi nke ụgbọ elu bịara pụta ìhè, na-adọta mmasị anyị mgbe niile na akụkụ ya dị egwu, ọ bụ ezie na a tụlere ya nke ukwuu. Ụlọ ọrụ mmepe egwuregwu Turkish Fes Game Studio jisiri ike wetara anyị akụkọ a nụzọ dị iche.
Nezie, Hezarfen Ahmet Çelebi gbasapụrụ nku ya, na obere chioma, jisiri ike banye nikpere mmiri nke Bosphorus. Hezarfen: Na mbara igwe nke Istanbul, Hezarfen na-efegharị nokporo ámá Istanbul wee zute ọtụtụ ihe mgbochi. Dị ka ndị na-egwu egwuregwu, anyị na-eme ike anyị niile iji mechaa akụkọ akụkọ akụkọ Hezarfen a ma gbalịa ime ya ebe ọ chọrọ ịga.
Hezarfen: İstanbul Semalarında Ụdịdị
Mmepụta: Fes Oyun Stüdyosu